Faha 57 taona nahazoana ny Fahaleovantena : miarahaba ny Malagasy i Donald Trump. - Book News Madagascar
Faha 57 taona nahazoana ny Fahaleovantena : miarahaba ny Malagasy i Donald Trump.
Publié juin 29, 2017 par Tiasoa
Nandefa hafatra tamin’ireo mpanao gazety ny Filoha amerikana Donald Trump ny Talata 27 jona lasa teo. Fiarahabana ny filoha sy ny vahoaka malagasy noho ny fitsingeran’ny niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara no vontoatin’izany hafatra izany.
Hafatr’i Donald Trump
Tsy nadinoin’i Filoha amerikana Donal Trump ny fitsingerenan’ny faha 57 taona nahazoan’i Madagasikara ny Fahaleovantena. Nandefa hafatra ho an’ny vahoaka malagasy izy, maneho ny fahavononany hatrany hiara-hiasa amin’ny firenena, indrinra eo amin’ny ady amin’ny asa fampihorohoroana iraisam-pirenena sy ny kolikoly. Toy izao ny hafany, araka ny voaray tamin’ny “mail”:
Amin’ny anaran’ny vahoaka amerikana dia tiako ny mampita aminao sy amin’ny vahoaka malagasy ny fiarahabana noho ny fitsingerenan’ny faha-57 taonan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara ny 26 Jona. Etazonia dia maneho hatrany ny fahavononany hiara-hiasa akaiky amin’ny vahoaka malagasy amin’ny fiatrehana ny ady amin’ny asa fampihorohoroana iraisam-pirenena, ny fanamafisana ny fandriampahalemana an-dranomasina, ny fampiroboroboana ny fihariana, ny ady amin’ny kolikoly ary amin’ny fiarovana ireo zavaboahary tokana aman-tany eto Madagasikara. Mirary anareo hankalaza ny fetin’ny fahaleovantenanareo ao anatin’ny hafaliana.”
Jerevo ato ny lahatsoratra sy ny hafatry ny filoha Donald Trump amin’ny teny frantsay sy anglisy.
Tsaroana fa napetraka ho Filoha tamin’ny fomba ofisialy ny 20 janoary 2017 teo i Donald Trump.
© Sary: Gage Skidmore